Home CIYAARAHA CADAADADA EE EUROPEAN Ciyaartoyda Kubadda Cagta Faransiiska Bafetimbi Gomis Sheeko Xeeldheer Xogta Warka Xogta
LB wuxuu soo bandhigayaa sheekada dhameystiran ee kubadda cagta ee ugu caansan oo loo yaqaan 'nickname'Black Panther". Dabeecadeena Bafetimbi Gomis iyo wargeyska Biography xaqiiqooyin ayaa kuu keenaya xisaab buuxa oo ah dhacdooyin la taaban karo oo laga bilaabo waqtigiisa carruurnimada ilaa taariikhda. Falanqayntu waxay ku lug leedahay sheekadiisa noloshiisa ka hor inta caan ka ah, asalka qoyska, nolosha xiriirka, iyo xaqiiqooyin kale oo caddayn ah oo caddaynaya (wax yar).
Haa, qof kastaa wuu ogyahay qaabka uu dabaaldaggu ugu dabaaldego himilada. Si kastaba ha noqotee, dhowr ka mid ah waxay tixgelinayaan Bafetimbi Gomis 'Bio kaas oo aad u xiiso badan. Hadda oo aan ado kale, aan bilaabi.
Bafetimbi Gomis Sheeko Xeeldheer Xogta Warka Xadida -Nolosha Hore
Bafetimbi Gomis wuxuu ku dhashay 6th ee Agoosto 1985 hooyadiis (aabaha) iyo aabbaha (shaqaale dawladeed), La Seyne-sur-Mer, Commune ee Faransiiska.
Gomis oo ka soo jeeda Senegal wuxuu ka yimaadaa qoys ballaaran oo ku saabsan carruurta 10, kuwaas oo dhamaantood u yimid barakacayaasha waalidkiis sawirkiisa hoos ku qoran.
Bafe, oo loo yaqaano caan ah, wuxuu ku koray Toulon, oo ah magaalo deked ah oo ku taal xeebta Mediterranean ee koonfurta France. Waalidiintiisu waa waalid aan wax qorin oo aan garanaynin sida loo akhriyo oo loo qoro, laakiin aad ugu raaxeysana shaqadooda. Marka laga hadlayo taas, Bafetimbi mar ayaa yiri;
Horumarinta, way ku adkaatay waalidkaygu in ay kormeeraan shaqada guriga ee bilowga. Markaad shaqayso, kaalay saacadda 6 aroortii, dib ugu soo noqoshada, iyo korka aad ku haysid carruur badan, waa adag tahay.
Bafetimbi Gomis wali waa ay qadarineysaa waalidiintiisa ka soo guureen dhammaan waddada Senegal ilaa France si ay u dhasho isaga oo ugu yeeray "Hal mar fursadda nolosha".
Bafetimbi Gomis Sheeko Xeeldheer Xogta Warka Xadida -Socdaalka Weyn
Gomis wuxuu ku hoos jiray caruurtiisa xanaanada sanadka 14 halka uu ciyaaray kubadkiisa maxaliga ah kaas oo aan waxba ka helin da'diisa. In kasta oo aabaheed ay bixiyaan biilasha iyo iibsashada qalabka isboortiga, wuxuu sidoo kale baska raacay mararka qaarkood inuu wiilkiisa u raaco goobta tababarka maadaama uusan lahayn ruqsadda wadista. Sida laga soo xigtay Gomis;
Riyadaydu waxay ahayd inaan guri iibsado waalidkay. Taasi waxay ahayd hadafkayga kaliya. Aad ayay u xanuun badan tahay in aabahay uu koro sagaal dabaq ka dib markii uu maalintii oo dhan shaqeeyay, inuu guriga ku socdo baaskiil sababtoo ah ma uusan haysan laysanka darawalnimada. Marmarka qaarkood, waxaa ku jiray kaadida wiishka meesha uu ku dhegay. Way adagtahay.
Markii uu bilaabay Dheef: Marka da'da 15 xilliga 2001-2002, Bafe wuxuu ku biiray akadeemiyadda dhallinyarada ee Saint-Étienne. Tani waxay ahayd wakhti uu bilaabay inuu helo kubada cagta. By 2004, Gomis ayaa kor u kacday dhinaca sare ee kooxda da 'yarta waxaana loo maleynayay inuu diyaar u yahay inuu ku soo bilaabo kubada cagta. Tani waxay ahayd wakhti uu ku dhiirraday inuu ku socdo aabbihiis si uu u sheego;
"Jooji, adigu waad fiican tahay, laakiin aniga ayaa bixinaya biilasha, markaad shaqada joojiso!"
The 2006-07 Xilli ciyaareedkii hore Gomis ayaa goolka guusha u dhaliyay Saint-Etienne isagoo dhaliyey goolka 40 ka hor inta uusan u dhaqaaqin Lyon halkaasoo uu ku dhaliyay goolal kale oo 64 ah.
Lyon, Bafetimbi wuxuu helay rikoorka Seddexleeyadii ugu fiicneyd Champions League marna gool dhalin, garaacista diiwaanka ay leedahay Mike Newell. Tani waxay keentay in City ay xiiseyneyso isaga markii uu qandaraasku dhacayay, islamarkaana ay dhibaato kala kulmaan Lyon. Kooxda reer Welsh ayaa nasiib u yeeshay inuu si xor ah ugu biiro. Ma uusan ogeyn ciyaartoyda Swansea ka hor inta aysan ka tagin Wales, Bafetimbi Gomis waa inuu isticmaalaa "Maamulaha kubadda cagta"Si loo baadho Swansea Ciyaartoyda. Inta kale, sida ay yiraahdaan, hadda waa taariikh.
Bafetimbi Gomis Sheeko-dheer-dheer Sheeko Xog-u-dhejis ah - Xishood Waxbarasho
Bafetimbi Gomis mar uu shaaca ka qaaday sida uu mar walba dareemay "ceeb"Iyo"hoos u dhac"Horaantii xirfaddiisa sababtoo ah waxbarasho la'aanta. Weeraryahankan ayaa sheegay in waalidiintiisa gaar ahaan hooyooyinkooda (sawirka hoose) ay siiyeen mabaadiida uu xirfadiisa ku hagayey.
Mid ka mid ah kuwan oo kale waxaa ka mid ah waxbarasho oo uu si xun u diidey, sidaas darteed waa mid ka mid ah qoomamadiisa ugu weyn. Erayada Bafaha;
Waxaa jira dhibaatooyin, badanaa, tusaale ahaan marka aad waydiiso qof dhalinyaro ah inuu dugsiga aado oo uu u arko inuu horay u kasbaday macallinkiisa, kubadda cagta.
Tani, iyada oo shaki la'aan, carqaladeeyay amarrada alaabta ee Bafe. Waxaa sidoo kale jira kiisaska waalidiintiisa ay ku waayeen dhammaan kantaroolka isaga sababtoo ah wuxuu ahaa adeegooda keliya. Waxaa jiray maalgashi maaliyad ah oo ku saabsan waxbarashada markii uu u baahnaa ugu badnaan. In uu erayadiisa;
Haddii aan heysto hal qoomamo, ma awoodo in aan maal-galiyo 100% waxbarashadayda. Aabahay ayaa iigu cadhooday arrintan muddo dheer. Hase yeeshee, wax badan kama dhihin sababta oo ah waxaan ku quudinay guriga, kharashkana ka bixiyay walaalahayga kale. Waxaan joojiyay dugsigeyga ka dib Sanadka 10. Maanta, waxaan ku adkaaday inaan naftayda muujiyo.
Wakhtiga qorista, Baha aabihiis ma aha wax dheeraad ah. Si kastaba ha ahaatee, waxbaridiisa iyo ereyadiisa ayaa weli wadnaha ku jira.
Samaynta Ballankiisa Aabbihiis: Xilligii uu ahaa 30, da 'da oo ku calaamadeysneyd mudo gaaban, Bafe wuxuu dib u bilaabay waxbarashadiisa isagoo ah qof weyn si uu u buuxiyo mid ka mid ah rajadiisa. Wuxuu bilaabay waxbarashadiisa Bac (Faransiis A-Level u dhigma). Nasiib darro, ma uusan gudbin sababta oo ah laba xaqiiqo oo uu sheeganayay. Marka hore, waxay ahayd dhalashada wiilkiisa kadib, waxaa jiray khilaafka isaga iyo Lyon. Wixii Baha xun, sabiibta ayaa sii socota.
Bafetimbi Gomis Sheeko-dheer-dheer Sheeko Xog-u-dhejis ah - Nolosha Xiriirka
Wixii Bafe ah, qoomamadiisa waxba kama dhicin tan iyo markii uu helay qof uu ula jeeday wax walba isaga. Wakhtiga qorista, xiriirka isdaba joogga ah ee cagaha adag wuxuu u dhexeeyaa Bafe iyo xaaskiisa (magaca aan la garaneyn) sida lagu sawiray hooseeya ilmahooda koowaad iyo wiilkiisa.
Sida lagu sawiray sawirka hoose, Bafe waa nin ka mid ah labo caruur ah. Waxa uu sameeyaa waxa ugu muhiimsan waa inuu nin sameeyo qoyskiisa. Iyaga oo halkaas jooga.
Qaadashada daqiiqado cajiib leh wiilkiisa waa sida ballanqaad inuu ku yeelan doono saaxibkii ugu fiicnaa nolosha. Wixii Bafe ah, dhaxalka quruxda badan ee ka soo jeeda aabbihiis daahay ayaa lagu muujiyay doorkiisa aabihiis.
Sida saaxiibtinimada Bafe ee bangiga xasuusta wiilkiisa, wuxuu u maleynayaa in wiilkiisa uu raaci lahaa tusaalihiisa, isagoo raacaya meesha uu kubada cagta uu ku dhamaado.
Bafetimbi Gomis Sheeko Xeeldheer Xogta Warka Xadida -Weerarrada
Ma ogtahay? Bafe wuxuu ka jiraa weerarada vasovagal taas oo ka dhigaysa inuu miyir beelayo marka uu ku dhaco diiqad. Ilaa iyo hadda waan ogaanay inuu niyadjabay afar jeer intii uu kubada cagta ciyaarayay.
Ku saabsan weerarrada Vasovagal: Waxyaallaha qaarkood sida diiqad ama heerkul kulul waxay sababtaa weerarkan. Wixii Bafe, tani waxay dhalinaysaa garaaca wadnaha oo hoos u dhacaya, taasoo keenta hoos u dhaca cadaadiska dhiigga iyo dhiigga u socda maskaxda taas oo horseedaysa luminta miyirka. Hoos waxaa ku qoran fiidiyowga oo muujinaya mid ka mid ah waqtiyada cabsida leh;
Bafetimbi Gomis Sheeko Xeeldheer Xogta Warka Xadida -Naftaada Shaqsiga
Bafe waxay leedahay shakhsiyad aad u saraysa. Marka uu doorto in uu isbedelo muuqaalkiisa sida muuqaalka muuqaalkiisa shimbiraha ah, Bafe wuxuu xajiyaa awoodiisa inuu ku carqaladeeyo carruurta yaryar iyada oo uu uga mahadcelinayo timaha wajiga oo kali ah.
Waxyaabaha kale ee aad u baahan tahay inaad ogaato ku saabsan Senegalese dhalashada Faransiisku waa taariikhda hodanka ah ee kala duwan ee dharka culus sida sawirka kor ku xusan.
Mararka qaar ma ahan wax xiriir ah oo ku saabsan kubadda cagta, Bafe waa qof weyn oo mas'uul ka ah oo ogyahay muhiimadda nadaafadda ilkaha wanaagsan.
Sawirada kor ku xusan waxay muujineysaa waxa dhacaya marka Bafe ay ciyaareyso kubada la'aan la'aantiisa madaxiisa.
Bafe waa hubaal waa nin jecel inuu muujiyo qadarin taas oo uu u arko inuu yahay baahida weyn ee dareenka. Qeybta twitter-ka ee hoose, wuxuu ku qanacsan yahay martiqaad uu u fidiyay hudheelka Turkiga halkaas oo isaga iyo qoyskiisuba joogeen muddo bilo ah ka hor intaysan iibin guri ku yaal dalka.
Bafe wuxuu marwalba xajiyey ereygiisa iyo ballanqaadkiisa taageerayaasha isagoo jaraya timihiisa. Sida laga soo xigtay wargeysyada, wuxuu balanqaaday inuu timihiisa jarayo haddii Cimbom uu ku guuleysto horyaalka horyaalka, waxaana uu jabiyay rikoorkii xirfadiisa ciyaareed xilli ciyaareedkii 2017 / 2018. Kuwaas oo dhammu way garteen. Xaqiijinta eraygiisa, Bafe ayaa mar dambe soo bandhigay sawir isaga qudhiisa ku helay timo jarista warbaahinta bulshada.
Bafetimbi Gomis Sheeko Xeeldheer Xogta Warka Xadida -Damaashaadka Goolka
Habka dabbaasha ee Bafetimbi Gomis wuxuu ka mid yahay waxyaabaha ugu khatarta badan kubada cagta. Ficilkiisa jilicsan ee jilicsan ee taageerayaasha ayaa shaki ku jiraa qarashka shumisga.
Taariikhda ama macnaha damaashaddiisa weli lama yaqaan. Si kastaba ha noqotee, taageerayaasha qaar, waxaa loo arkaa inay si aad ah u dhib badan yihiin bini aadaminimo caadi ah si ay si lama filaan ah ugu soo degaan gacmihiisa iyo jilbaha oo ay u socdaan si toos ah Gollum Eebaha siddooyinkii.
Waa maxay taageerayaashu: (i) Waxay dareemeysaa sida haddii aad sawirtaa sawirka muddo aad u dheer, wuxuu u socdaa inuu noolaado oo uu cuno naftaada. (ii) Ka dib markaan arko sawirkaas, haddii aad dareemayso baahida loo qabo in qoyskaaga la qabsado ama u yeedho hooyada kaliya si ay u ogeysiiso inaad jeceshahay iyo in aad tahay arrin wanaagsan, taasi waa la fahmi karo. (iii) Waxaan fahamsanahay in goolal dhalinta ay tahay wax lagu qiimeeyo. Laakiin Gomis waa in uu isku dayaa oo uusan ka dhicin jahwareerka malaayiin aduunka oo dhan adoo samaynaya.
Kadib, xilligii Lyon, maalmaha Lyon, Bafe wuxuu lahaa qaab saaxiibtinimo oo dabaaldega jinni, gaar ahaan caruurta.
FACT CHECK: Waad ku mahadsantahay akhrinta sheekada nooceeda Bafetimbi Gomis iyo faahfaahinta sawirada aan la sheegin. At LifeBogger, waxaan ku dadaalnaa saxnimada iyo caddaaladda. Haddii aad aragto wax aan ku haboonayn maqaalkani, fadlan dhiibo faallooyinkaaga ama nagala soo xiriir!
Jibriil Cisse Childhood Story Plus Xaqiiqooyinka Wada-noolaanshaha Xaddidan
Blaise Matuidi Childhood Story Plus Xaqiiqooyinka Weriyeyaasha Xogta